Real Madrid oo ku Guulaysatay koobka kooxaha aduunka, markii ay 4-1 uga badiyeen kooxda Al Ain. - Latest News Updates
Real Madrid oo ku Guulaysatay koobka kooxaha aduunka, markii ay 4-1 uga badiyeen kooxda Al Ain.
Real Madrid ayaa difaacatay koobka kooxaha aduunka ee Club World Cupka kadib markii ay 4-1 ku garaacday kooxda Al Ain waxaana guushan Madrid ka caawiyay Luka Modric, Marco Llorente iyo Sergio Ramos oo min hal gool dhaliyay.
Real Madrid ayaa markii saddexaad oo xiriir ah ku guulaysatay koobka kooxaha aduunka iyada oo Santiago Solari uu koobkiisii ugu horeeyay ee Madrid la qaatay isaga oo tababare ah. Real Madrid ayaa guushan ku gaadhay 4-1 iyada oo kooxda Al Ain ay dhamaadkii ciyaarta goolka calanka keensatay.
Haddii uu Julen Lopetegui ku soo fashilmay in fursadiisii UEFA Super Cup uu Atletico Madrid u lumiyay, Solari ayaa fursadiisa si buuxda uga faa’iidaystay inkasta oo ay wali guranayaan midhihii uu ka tagay Zinedine Zidane oo ah in uu suurtogal ka dhigay in Madrid ay tartamadan ugu jirtay ku guulaysigii Champions league.
Kooxda Al Ain ayaa iska caabin xoogan kala hortimid Real Madrid,balse khibrada Los Blancos ee tartanka koobka kooxaha aduunka ayaa ahaa farqiga wayn ee labada kooxood u dhexeeyay marka laga yimaado tayada ciyaartoyda labada kooxood iyo sida ayna iskugu heer u ahayn.
Real Madrid ayaa qaybtii hore ee ciyaarta fursado badan heshay iyada oo ay goolal dhalin kareen Karim Benzema, Lucas Vazquez, Gareth Bale laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay Madrid guul ugu taagnayd isla markaana ay 45 daqiiqo u jirtay koobka kooxaha aduunka.
Daqiiqadii 78 aad Real Madrid ayaa si rasmi ah u xaqiijisatay koobka kooxaha aduunka ee Club World Cupka kadib markii uu Sergio Ramos dhaliyay goolka saddexaad ee ay Los Blancos si dhab ah ciyaarta ugu dishay kadib markii uu caawin ka helay Luka Modrić.
Ciyaarta ayaa noqotay 3-0 iyada oo 12 daqiiqo oo kaliyi ka hadhsan yihiin waxaana sidaa ay Madrid ku heshay fursada ay daqiiqo ka hor ugu sii faraxday in koobka goobta yaalay uu keedii noqday isla markaana ay koobkan difaacatay.
Markii uu goolka dhaliyay Sergio Ramos ayaa si toos ah ugu tagay Isco isaga oo laabta galiyay si uu ula dabaal dego taas oo u muuqatay in uu la qaybsanayay dareenka in uu kaydka markale ku jiray oo aanu helin fursad uu kulankan ugu soo bilawdo.
Daqiiqadii 86 aad kooxda imaaraadka carabta ee Al Ain ayaa keensatay goolka calanka kadib markii uu Shiotani goolkan ku dhaliyay kubbad laaga xorta ah oo la soo tuuray waxayna ciyaartu noqotay 3-1 ay Madrid wali laba gool ku haysato.
Ugu dambayntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-1 kadib markii uu xidiga kooxda Al Ain ee Yahia Nader uu goolka afraad iska dhaliyay, wuxuuna Solari kooxdiisa Madrid la qaaday koobkiisii ugu horeeyay isaga oo tababare ah. Real Madrid ayaa markii saddexaad oo xidhiidh ah ku guulaysatay koobka kooxaha aduunka.